Zava-bitany | WordPress.org Malagasy
WordPress no mampiodina maherin'ny 43% amin'ny tranonkala misy ankehitriny, ary mitombo isan'andro io isa io. Ny karazany rehetra hatramin'ny tranonkala tsotra indrindra, hatramin'ny andian-tranonkala avo lenta ho an'ireo orinasa, eny fa na dia ireo applications sasany aza, dia vita amin'ny WordPress.
Sady mora ampiasaina ho an'ny olon-tsotra sy ny mpamokatra ny WordPress no mahazaka tsara ny filàn'ireo mpikirakira kaody. Izany no mahatonga azy sady azo volavolaina tsara nefa sady mora ampiasaina. Ireto manaraka ireto ohatra dia anisan'ireo zava-bitan'ny WordPress tsotra ; nefa mbola misy koa plugins an'arivo afaka manitatra ny zava-bitany mihoatra izay mety ho takatry ny saina. Sady azonao atao rahateo koa ny mikitika ny kaodin'ny WordPress araka izay hitiavanao azy, na dia ho ampiasainao amina filàna ara-barotra aza, nefa tsy hisy vidina license ho alohanao. Izany no tena mahatsara ny rindrankajy "free" (logiciel libre), ny "free" eto sady midika hoe tsy misy vola aloha no midika koa hoe malalaka tanteraka ianao amin'izay ho ataonao aminy.
Ireto misy sasantsasany amin'ireo zava-bitany heverinay fa mety ho tianao.
Afaka manangana izay mety ho karazana tranonkala rehetra ianao amin'ny alalan'ny WordPress : blaogy tsotra na tranonkala ho anao, blaogy an-tsary, tranonkala ofisialy ho an'ny orinasa, tranonkala ho an'ny andrim-panjakana, tranonkala fampahalalam-baovao na ho an'ny orinasa fanaovan-gazety, eny fa na tambazotrana andian-tranonkala aza. Afaka hatsarainao amin'ireo bika maro ny tranonkalanao, ary afaka hitarinao amin'ireo plugins ny zava-bitany. Azonao atao mihitsy aza ny manao ny application anao.
Manorata amin'ny fomba tsotra
Raha efa nampiasa Word ianao dia efa afaka mahay tsara ny fampiasana WordPress. Afaka mamorona lahatsoratra sy pejy, manamboatra ny endriny, mampiditra sary, ary mipendy bokotra iray fotsiny dia mahatafavoaka azy ho hitan'ny rehetra amin'ny web.
Natao ho mora mihitsy ny fitantanana ny vokatrao amin'ny WordPress. Manomboka vakiraoka, manomana mialoha ny fivoahan'ny lahatsoratra, na mitsirika ireo fanitsiana tany aloha. Ianao no misafidy na ho atao ampahibemaso ny lahatsoratrao na ho atao miafina, na koa miaro ireo lahatsoratra sy pejy amin'ny tenimiafina.
Manaraka tanteraka ny fenitra
Ny singa rehetra mandrafitra ny kaody ao amin'ny WordPress dia mifanaraka amin'ny fenitra takian'ny W3C. Izany hoe handeha tsara ny tranonkalanao amin'ireo navigateurs ankehitriny, sady mitsinjo ny hampandeha azy amin'ireo navigateur any aoriana. Tsara voatra ny tranonkalanao, amin'ny ankehitriny sy ny ho avy.
Fitantanana endrika amam-bika tsotra
Efa misy bika telo avy hatrany miaraka amin'ny WordPress, fa raha tsy misy mety aminao ireo dia misy tahirim-bika feno bika aman'arivony ahafahanao manamboatra tranonkala tsara endrika. Tsy misy tianao ireo ? Bokotra iray no tsindrianao dia efa azonao atao koa ny mandatsaka ny bika anao manokana. Segondra vitsy monja no ilaina mba hananan'ny tranonkalanao fiovan'endrika tanteraka.
Hitaro amin'ny plugins
Fanehoan-kevitra efa raisina an-tanana
Mampiasà WordPress amin’ny Tenindrazanao
Azo ampiasaina amin'ny fiteny maherin'ny 70 ny WordPress. Tsotra kely no atao raha te hampiasa ny WordPress amin'ny fiteny hafa ianao.
Mora apetraka sy hatsaraina
Mora ny mampiditra sy manova WordPress. Betsaka ihany koa ireo mpampiatrano tranokala izay manolotra fomba Fampidirana WordPress amin’ny alalan’ny tsindry bokitra iray monja! Fa raha aleonao moa mampiasa FTP, mamorona base de données, ampakaro WordPress dia atombohy ny fampidirana azy.
Fifindrana mpampiantrano tranonkala
Fehezo ny momba anao
Mampiasa ny license GPL ny WordPress mba hiheverana manokana ny fahalalahana. Malalaka tanteraka iana amin'izay mety hampiasanao ny WordPress : i-install azy, mampiasa azy, hanova azy, hizara azy. Ny fahalalahana amin'ny rindrankajy no anisan'ny fototra iorenan'ny WordPress.
Fitaovana ho an'ny mpikirakira kaody
Raha maniry hanorina application ianao, afaka manampy anao amin’izany ihany koa WordPress. WordPress dia manolotra fiasana maro izay azon’ny application-nao ampisaina : fandikana teny, fandrindrana mpikambana, requêtes HTTP, base de données, fanodinana URL sns sns maro be. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny REST API anay ahafahanao mifandray amin’ilay application.